आइम्याक्स प्रोडक्सनले नेपालमा ल्यायो ‘बिग बोस’ - Everest Dainik - News from Nepal
आइम्याक्स प्रोडक्सनले नेपालमा ल्यायो ‘बिग बोस’
काठमाण्डौ, बैशाख ०३ । नेदरल्याण्ड्सको इन्डिमोल साइनद्वारा सञ्चालित ‘बिग ब्रदर’को फ्रेन्चाइज ‘बिग बोस’ नेपालमा औपचारिक रुपमा आइम्याक्स प्रोडक्सनले ल्याएको छ । आइम्याक्सले यो कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो फ्रेन्चाइज टीभी रियालिटी शो हुने दाबी गरेको छ । आइम्याक्स प्रोडक्सन तथा इन्डिमोल साइनको संयुक्त सहकार्यमा टेलिभिजनको सबैभन्दा ठूलो रियालिटी शो बिग बोस नेपाल प्रसारण हुन थालेको हो ।
याे पनि पढ्नुस बिग बोस–१२ को तयारी अन्तिम चरणमा, को को भए छनौट ?
आइम्याक्स प्रोडक्सनले कानुनी रुपमा बिग ब्रदर नेदरल्याण्डद्वारा फ्रेन्चाइजी अफिसियली रुपमा ल्याएको हो । सोमबार होटल सोल्टीमा औपचारिक उत्सवको आयोजना गरी नेपालमा बिग बस औपचारीक रुपमा सुरु भएको जानकारी गराइएको छ । नेपाल भित्रिएको यो रियालिटी शो नेपालकै एक नेपाली टेलिभिजन च्यानलबाट चाडै नै सुरु हुने बताइए पनि कुन च्यानलबाट प्रसारण हुने भन्नेबारे जानकारी दिइएको छैन । देशअनुसार फरक–फरक भाषामा सञ्चलित भएको यो कार्यक्रम नेपालमा नेपाली भाषामै प्रसारण हुनेछ । यसरी सञ्चालन हुने कार्यक्रम बिग ब्रदरकै संरचनाअनुसार हुनेछ ।बिग बोसभित्र रहने सहभागीहरु १०० दिनसम्म सञ्चार सम्पर्कविहीन रही सहभागिता जनाउँदै विभिन्न काम पूरा गर्दै बिग बोसको ट्रफी जित्नेछन् ।
याे पनि पढ्नुस बिग बोसः यो हप्ता घरबाट बाहिर हुनसक्छ हितेन तेजवानी !
ट्याग्स: Big boss, I max production